केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको एउटा आधुनिक शैलीको युगल गीतले युट्युब तथा टिकटकमा मात्र होइन, सार्वजनिक जीवनमा समेत लोकप्रियता हासिल गरेको कुरा सुनेर उक्त गीतका गायक आशिष गौतम सचिन दंग छन् । आफ्नो सांगीतिक जीवनकै दोस्रो गीत विवाह भोजदेखि पिकनिकसम्म बजाएर नाचिरहेको देख्दा यी युवा गायक दंग नपर्ने कुरै भएन ।
हुन पनि, ‘पिरिम नलाउने...’ गीत आजको मितिसम्म युट्यबुमा १ करोड ९५ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । टिकटकमा यही गीतमा हजारौंले अभिनय तथा नृत्य गरेका छन् । टिकटकमा त सर्वसाधारण मात्र होइन, नेपाली सेलिब्रेटीहरूले समेत यही गीतमा आधारित भएर भिडियो बनाएका छन् ।
दीपक शर्माको शब्द तथा संगीतको उक्त गीतमा गायक आशिष सचिनलाई गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छिन् । सुव्रतराज आचार्यद्वारा निर्देशित म्युजिक भिडियोमा गायक आशिष सचिनसँगै अभिनेत्री वर्षा राउत तथा तीन दर्जनभन्दा बढीले नृत्य गरेका छन् ।
लोकधुनसमेत मिश्रण गरिएको यो गीतको भिडियोले युट्युबमा अपलोड भएको डेढ महिनामै १ करोड भ्युज पाइसकेको थियो । गायक सचिनले उक्त गीतको सफलतापछि संगीतकार दीपक शर्माकै संगीत निर्देशनमा उक्त गीतको सिक्वेल समेत गाउने घोषणा गरेका छन् । यसअघि मेरो हरपल शीर्षकको गीत गाएका गायक सचिनको तेस्रो गीत दिन पनि भेरी गुड चाँडै दर्शकमाझ आउँदैछ ।
यसबीच युट्युबमा ८५ हजार लाइक तथा २ हजार ८ सय ३० वटा प्रतिक्रिया पाउने उक्त गीतको भिडियोले प्राप्त गरेका केही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया :
तीन वर्षसम्म पनि विदेशबाट घर नजाने, हल्का दार्‍ही फुलेकाहरूले यता हाजिर गरौं त । त्यसका बाजे, कस्तो राम्रो सिर्जना हो ।
यो गीत टिकटकका लागि नै बनेको हो ।
मानव बस्याल शर्मा
दिनमा एक न एकचोटि यो गीत नहेरी मनै मान्दैन ।
तीन महिनामा एक महिना नि गाउँमा नआउने, क्यारी होला यस्तासँग माया पलाउने, भैगो भैगो तिमीसँग पिरिम नलाउने । साह्रै उत्कृष्ट गीत ।
मौलिक गीत–संगीतलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुहोस् है । यस्तै सुमधुर छ यो गीत । एक पटक सुन्न नभुल्नुहोला ।
अर्जुन तिवारी अविरल
साथी हो, पासपोर्ट जोगाएर राख्नु है । घर जाँदा श्रीमतीले च्यात्न बेर छैन यो गीत हेरेपछि । राम्रो छ, गीत मन पर्‍यो ।
सुरज र सागर
सलाई बिना आगो बल्ने भए, पैसाबिना संसार चल्ने भए, ल्हासा किन जान्थे र मदन, मायाले नै संसार चल्ने भए । असाध्यै सुन्दर गीत र भिडियो ।
लिन आउँछु घर तिम्लाई बाजा बजाइ, नमानेमा जबर्जस्ती लान्छु भगाइ ।
आँखाबाट आँसु नै झर्‍यो भिडियोको अन्तिम दृश्यले ।
कति राम्रो स्वर छ हजुरहरू दुवै जनाको ।
गजब प्रस्तुति अनि राम्रो गीत र नृत्य ।
यो गीतले मेरो घरबार बिगार्ला जस्तो लाग्यो यार ! घर नगा’को पनि चार वर्ष हुन लाग्यो । अब यो तालले भएन । घर त जसरी पनि जानुपर्छ । एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्षमा घर जानुपर्ला भन्ने सोच गरेको थिएँ, अहँ हुँदैन । अब घर जानुपर्छ । पैसा भन्ने यस्तै हो । अब थप नगर्ने, चार महिना बाँकी छ । अब जानुपर्छ ।
समसामयिक विषयमा आधारित यो गीत उत्कृष्ट छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता कुनै पनि नयाँ गीत कति लोकप्रिय छ भन्ने कुराको मापन गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ यूट्युब । नेपाली गीत–संगीतमात्र होइन, हिन्दी तथा अंग्रेजी गीतको लोकप्रियताको मापन पनि अचेल यूट्युबको भ्युजबाटै हुन थालेको छ । यही मेसोमा यतिबेला नेपाली सांगीतिक बजारमा एउटा लोकदोहोरी गीत भाइरल भएको छ । करिब तीन महिनाअघि वसन्त थापाको यूट्युब च्यानलमा अपलोड भएको ‘सालको पात टपरी हुने...’ गीत यतिबेला हरेक दर्शकको मनमा बस्न सफल भएको छ । अहिलेको पिकनिकको मौसममा यो गीतको महत्व अझ बढेको छ ।
कुलेन्द्र विक तथा विष्णु माझीको स्वरको यो गीतको म्युजिक भिडियो हालसम्म २ करोड ७१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । हरेक उमेरका दर्शकले मन पराएको यो गीतको म्युजिक भिडियोमा गायक कुलेन्द्र बिकसंगै अभिनेत्री मरिष्का पोखरेल तथा अभिनेता वसन्त थापाले कोरससँगै आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गरेका छन् । १४ मिनेट २३ सेकेन्ड लामो उक्त गीतमा समावेश धुन, प्रयोग गरिएका शब्द तथा बाजाले गीतको सौन्दर्य त बढाएकै छ, भिडियोमा पनि मौलिकता पाइन्छ ।
गीतका सर्जक कुलेन्द्र विक समेत अहिले दंग छन् । ‘गीत राम्रै बने जस्तो लागेको थियो, गायक विकको भनाइ छ– तर यति धेरै लोकप्रियता पाउला भन्ने थिएन । यो गीतका शब्द नवराज पन्तले रचना गरेका हुन् भने वसन्त थापाले त्यसलाई संगीतबद्ध गरेका हुन् । मौलिक शब्द तथा आधुनिक शैलीको संगीतले यो गीतलाई लोकप्रिय बनाएको उनको कथन छ । आशिष अविरलद्वारा संगीत संयोजन गरिएको यो गीतको भिडियो शिव विकले निर्देशन गरेका हुन् ।
यूट्यबुमा आएका केही प्रतिक्रिया :
जोडी पन्छी देखे पनि घरमुनिको बोटमा, तारा खस्दा तिम्रै नाम आउँछ मेरो ओठमा...वा क्या शब्द छ, अनि संगीतको दम भन्नु नै वसन्त दादाको नाम हो र त्यो नाम आफैंमा काफी छ । कुलेन्द्र दा र विष्णु दिको गायकीको बयान गर्न मेरो क्षमताले भ्याउँदैन । निकै उत्कृष्ट गीत, आफैंमा बलियो छ । भिडियोको मेहनतका लागि सलाम छ शिव दाजु ।
मलाई लोक गीत खासै मन पर्दैनथ्यो, तर जुन दिन यो गीत सुनें, म लोक गीतको फ्यान भएँ ।
बिरामीलाई औषधि जस्तै बिहान, दिउँसो, बेलुका, राति कम्तीमा एक–एक पटक सेवन नगरी नहुने, कस्तो गीत हो यो ?
नेपाली गीत–संगीत जगतमा यस्तै सिर्जना हुँदै जाने हो भने विदेशी गीत–संगीतको प्रकोप कम हुनेछ ।
मौलिकता झल्किएको छ । नेपाली लोकदोहोरीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मन परेको गीत यही हो ।
हैट, जिन्दगीमा पहिलो पटक लोकदोहोरी गीत मन परेको र धेरै पटक सुनेको यही हो ल ।
लोक गीतमा सबैभन्दा धेरै दर्शक पाएको गीत १.सालको पात टपरी, २.उही खोलाको पानी, ३. बोल माया ।
मलाई सबैभन्दा खुसी लागेको नेपाल आइडलले पनि यो गीतलाई सम्मान गर्‍यो, जसले लोक तथा दोहोरी गीतको प्रचार–प्रसार अनि सम्बद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
लोक गीतको इतिहासमा लेखिनु पर्छ यो सिर्जना । कस्तो मीठो स्वर अनि लय, म त हेरेको हेर्‍र्या भएँ ।
विष्णु माझीको गीतले एक किसिमको तरंग फैलाउँछ युवाहरूमा । उनको आवाज मै मोहनी छ । तपाईंको आवाज लता मंगेशकरभन्दा कम छैन । सधैं यस्तै आवाज सुन्न पाइरहियोस् ।
हाम्रो नेपालमा अब परिवर्तन आएछ । गायक,गायिका, कोरियोग्राफर सबैलाई धन्यवाद छ । साह्रै राम्रो गीतका साथै भिडियो पनि साह्रै राम्रो ।